Vaovao faran’ny Lingua : Desambra 2019 · Global Voices teny Malagasy
Tsara be iny taona iny!
Voadika ny 20 Janoary 2020 3:46 GMT
Arahaba daholo! Indro atolotro anareo ny toerana nisy ny Lingua tamin'ny Desambra 2019.
Ny fitambarana ho an'io volana io, namoaka lahatsoratra 511 isika, nahasarika mpitsidika 250.232 ary jeripejy 416.280. Nahatratra 258.734 ny isan'ireo mpankafy ny pejintsika Facebook iombonan'ny Lingua ary 262.960 ireo mpanjohy tao amin'ny Twitter. Tamin'ny 2019, asa fandikàna 6.988 no tafavoakantsika, mpitsidika 3.517.558 no azo ary jeripejy 4.320.962
Indro ny topimaso momba ny fandehan'ireo tranonkala rehetra tamin'ny volana lasa.
Laila Le Guen nirotsaka ho isan'ny mpikambana ao anatin'ny tarika mpitantana ny Lingua amin'ny maha-mpitantana ny Fandikana ho teny frantsay
Arabo ar 122,708
Espaniôla es 19,425
Frantsay fr 17,199
Amharic am 8,813
Arabo ar 42,171
Bangla bn 8,206
Espaniôla es 7,578
Frantsay fr 5,552
TIreo nitarika tamin'ny 2019 :
Arahabaina ny tarika rehetra, ary misaotra betsaka anareo manampy ny Global Voices ho azo raisina amin'ireny teny marobe ireny, tsy mampino foana ny mahita ny hetsiky ny Lingua! Taona vaovao goavana indray ity! 🙂
Aza adinoina ny manaraka ny Lingua ao amin'ny Twitter sy Facebook! Zarao amin'ny namana sy ny tambajotranao azafady ny ny taratasy fangatahana hanatevina laharana ny Lingua. Mandika teny ho amina fiteny ampolony maro izahay! Farany, misorata anarana hahazo ny vaovaon'ny Lingua!